Siteinfo: arethar... အာသာဖြေတော့ အာသာပြေတာပေါ... ??? status
site address: aretharphay.blogspot.com/2010/09/thinzar-achitywar.html redirected to: aretharphay.blogspot.com/2010/09/thinzar-achitywar.html
site title: အာသာဖြေတော့ အာသာပြေတာပေါ့: ငယ်ငယ်ကဇတ်လမ်း thinzar (achitywar)
Our opinion (on Thursday 06 May 2021 7:01:47 GMT):
#သမီး #အင်း #ဟင်း #သမီးလည်း #ဘွတ် #အင့် #သမီးက #သမီးရဲ့ #အရမ်းကောင်းတာပဲ
Go To: aretharphay.blogspot.com/2010/09/thinzar...
tuesday, september, 14, 2010, ငယ်ငယ်ကဇတ်လမ်း, thinzar, achitywar, comment, အာသာဖြေတော့, အာသာပြေတာပေါ့, blog, archive, about, me, followers,
ပတ် (106), အား (96), ကျွတ် (62), #ဘွတ် (62), #အင်း (32), #သမီးရဲ့ (28), #အင့် (24), သူက (22), #ဟင်း (20), #သမီး (14), ကောင်းလိုက်တာ (14), #သမီးလည်း (14), #အရမ်းကောင်းတာပဲ (10), #သမီးက (10), အိုး (10), ရာဇာရယ် (10), တယ် (10), ဆောင့် (8), အမလေး (8), သူ့လီးကြီးကို (8), သီရိ (8), ရာဇာ (6), ဖပ်ဖပ် (6), အားပါးတရ (6), ဖင်ကို (6), ခုတင်ပေါ်မှာ (6), post (6), တောင်မတ်နေတဲ့ (6), သူ့လီးကို (6), ဆောက်ဖုတ်ထဲကို (6), သူ့ (6), ငါလည်း (4), ဆရာမက (4), ဆက်တိုက် (4), လိုက်တယ် (4), နင် (4), ဒီနေ့ညနေ (4), ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး (4), အရမ်းထိတာပဲဟယ် (4), လရည်တွေ (4), ကို (4), ကော့ကော့ပြီး (4), ခဏနေ (4), ကျင်ကနဲ (4), ငါတို့ (4), စိတ်လိုက်မာန်ပါနှင့် (4), အီး (4), ပြီးတော့ (4), အသွင်း (4), ဆိုပြီး (4), မတ်တပ်ရပ်ပြီး (4), ဟင်းဟင်း (4), အထိ (4), သူ့လီး (4), နင်နဲ့ငါ (4), စုပ် (4), သီရိရယ် (4), ရာဇာက (4), သူ့ဒစ်ဖျားနဲ့ (4), တော့ (4), ၀င်သွားတော့တာပေါ့ (4), ဆောက်ခေါင်းအ၀က (4), reply (4), ကောင်းအောင် (4), achitywar (4), thinzar (4), ငယ်ငယ်ကဇတ်လမ်း (4), ဘယ်လို (4), comment (4), တော်ပြီဟယ် (4), september (3), ချစ်လူမိုက် (3), 2010 (3), share (3), လရည်တွေကို (2), လိုးမှာဖြင့်လည်း (2), ဆွဲပေးထားလိုက်တော့ (2), လက်ကျန် (2), လိုးပေးပါတော့ (2), အတော် (2), ဇိမ်တွေ့သွားပြီး (2), အပေါ်ကနေ (2), တရှူးရှူး (2), ပက်လက်အိပ်ခိုင်းပြီး (2), သူလီးထဲက (2), သူကသမီးကို (2), တရှဲရှဲ (2), ဆောင့်နေရင်း (2), သူ့လီးကြီးနဲ့ကော့ကော့ပြီး (2), လာတော့တာပေါ့ (2), နှင့် (2), ပန်းထွက် (2), နင်းကန်ဆောင့်နေရင်း (2), ပါတယ် (2), ပန်းထုတ်ပေးနေ (2), လုပ်နေတာလဲဟယ် (2), အရမ်းယားနေပြီ (2), ပြည့်ကျပ် (2), ငါထပ်အလိုးခံချင်သေးတယ်ဟာ (2), သမီးကော့ကော့ (2), နင့်လီးကြီးနဲ့ (2), ထပ်လိုးပေးဦးဟယ် (2), နင်ငါ့ကို (2), ထထိုင်လိုက်ပြီး (2), ရာက (2), လှဲနေ (2), မိနစ်လောက်နားပြီးတာနဲ့ (2), ခံလို့ကောင်းတာပဲ (2), အရမ်းကို (2), နေပြီး (2), လီးကြီးကလည်းငါ့ဆောက်ဖုတ်ထဲမှာ (2), သမီးဆောက်ဖုတ် (2), နင့် (2), ၀င်လှဲလိုက်ပါတယ် (2), သမီးဘေးမှာ (2), ပြောရင်းနဲ့ (2), သိလား (2), နင့်ကိုလိုးရတာ (2), တက်လာပါတယ် (2), တောင်မသိတော့ပါဘူး (2), ပြောရမှန်း (2), သားနှစ်ခုနဲ့ (2), ကောင်းလိုက်တာဟယ် (2), ပူခနဲပဲ (2), ထဲမှာလည်း (2), သူ့လီးကိုညှပ်ပြီး (2), ကော့ကော့ (2), နှုတ်ခမ်း (2), စိုက်စိုက် (2), မှာပါအေးပြီး (2), ဖြစ်သွားပြီးရင်ထဲ (2), လိုးလို့ (2), ငါ့လီးတစ်ချောင်းလုံးမှာ (2), သမီးဆောက်ဖုတ်ကို (2), အရမ်းမိုက်တာပဲ (2), ပြဲသထက်ပြဲလာအောင်ပေါင်နှစ်ချောင်းကို (2), ပေးနေတာလည်း (2), ပြန်လိုး (2), အောက်ကနေပြီးဖင်ကို (2), ဖြဲကားပေးထားတာပေါ့ (2), သိပ်အရသာရှိတာပဲ (2), ၀င်သွားတာ (2), အောက်ကို (2), ယင်ယင် (2), နင့်လီးကြီးက (2), အသာလေးသွင်းလိုက် (2), နာနာဆောင့် (2), ထုတ်လိုက် (2), လုပ်နေ (2), ရာကနေ (2), ကုန်းပြီးဆောင့်တော့တာပဲ (2), စိတ် (2), လိုက်မာန်ပါနှင့် (2), ပြန်လိုးပေးနေတာပေါ့ (2), အားပါးတရဆောင့်ထိုးလိုက်တော့ (2), ကြီးက (2), အောက်ကနေပြီး (2), တုန်တုန် (2), ဖြစ်လာတယ် (2), ဒူးနှစ်ဖက်ကို (2), တစ်ဝက်လောက်အထိ (2), ဆောက်ဖုတ် (2), ပေးရင်း (2), ဆောက်ခေါင်းအဆုံးအထိ (2), နေရတယ် (2), လူးလွန့် (2), လှန်တွန်းလိုက်ပြီး (2), တော့သမီးမှာ (2), ဆောင့်နေ (2), လီးကြီးကို (2), ကျိန်းနေတာပဲ (2), ဆောက်ဖုတ်ကို (2), ဆောက်ပတ်ထဲ (2), ဖိသွင်းလိုက်ပါတော့တယ် (2), လီးကြီးက (2), ထွက်လာတယ် (2), ၀င်သွားပုံရပါ (2), သမီးဆောက်ပတ်ထဲမှာတင်းခနဲဖြစ်သွားတယ် (2), တဖပ်ဖပ်နဲ့ (2), ရိုက်မိသံတွေ (2), ကိုယ်လုံးချင်း (2), လိုးနေတော့ (2), ဆောင့်ဆောင့်ပြီး (2), သူလဲ (2), လိုးပေးပါဦးဟယ် (2), ဒါဆိုလဲ (2), အသာလေး (2), ညှောင့်ပေးနေတယ် (2), မ၀သေးဘူးဟ (2), တစ်ခါနဲ့ (2), သူ့လီးကိုငုံပြီး (2), ငါက (2), အားသီရိရယ် (2), အဆုံးထိ (2), ရောက်အောင် (2), ဆွဲမထုတ်တော့ပဲ (2), တစ်ဝက်လောက်အထိပဲ (2), အထုတ်လုပ်ပြီး (2), ခပ်သွက်သွက်လေး (2), ဆောင့်ပေးနေလိုက်တယ် (2), ငါမရတော့ဘူး (2), စည်းချက်ညီညီ (2), ထွက်တော့မယ် (2), ဆိုတာနဲ့သမီးကဆောင့်ပေးနေတဲ့ (2), အရှိန်ကို (2), မြန်လိုက်ပြီး (2), ချက်လောက် (2), ဆက်တိုက်ဆောင့် (2), လိုးနေကြရင်းသမီးက (2), ကော့လိုက်နဲ့ (2), ထွက်ပြီ (2), ၀င်အောင် (2), သမီးရဲ့ဆောက်ဖုတ်ထဲကို (2), တစ်ဆုံး (2), ပစ် (2), တာမှလီးကို (2), ဒစ်ထိပ်ဖျားရောက်တဲ့ (2), ဆွဲထုတ်လိုက် (2), တစ်ဆုံးအထိ (2), ပြန်ဆောင့်ချ (2), သမီးတို့နှစ်ယောက်ဆောင့်လိုက် (2), လိုက်နဲ့ (2), အားရပါးရပဲ (2), လိုးနေလိုက်တယ် (2), ရာဇာကလည်း (2), ဆောင့်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာ (2), အောက်ကကော့ (2), ကော့ (2), ပေးနေတယ် (2), လိုက်တော့ (2), ထွက်သွားပြီ (2), ဖြစ်သွားပြီး (2), ထပ်ပြီး (2), လက်တွေ့အလိုးခံ (2), ရမှပဲ (2), အရသာခြင်းက (2), တခြားစီပဲဆိုတာ (2), သိရတော့တယ် (2), သမီးတို့ (2), နှစ်ယောက်လုံး (2), လိုးချင်ကြပေမယ့် (2), ကလိနေရုံနဲ့ (2), မိဘတွေပြန်လာတော့မှာ (2), မို့လို့ခဏနေပြီး (2), လူခြင်းခွဲလိုက် (2), ကြရပါတော့တယ် (2), tuesday (2), အာသာဖြေတော့ (2), ကျေနပ်နေရတာ (2), ထည့်ပြီး (2), ဆိုတဲ့ (2),်နေရင်းနဲ့ပဲခဏနေတော့ (2), ရာဇာ့အသံနဲ့အတူ (2), ဆောက်ခေါင်းထဲ (2), မှာ (2), ပူခနဲဖြစ်သွားတယ် (2), လရည်ထွက်ပြီးသား (2), ဆောက်ဖုတ်ကမချွတ်သေးပဲ (2), အသာလေးအသွင်းအထုတ်လုပ် (2), သူ့လီးကြီးကပျော့ပြီး (2), လက် (2), ကျွတ်ထွက် (2), သွားပါတော့ (2), လီးနဲ့အလိုး (2), ခံဖူးတာ (2), ဒါပထမဆုံးပဲ (2),ါတိုင်းဆိုရင် (2), ဆောက်ဖုတ်ထဲ (2), သူ့လီးတုတ်တုတ်ကြီးက (2), တင်းခနဲ (2), နင်ခံနိုင်မယ်ဆိုရင် (2), ကျွတ်အင်း (2), လုပ်ပေးနေရာ (2), ဒစ်ကို (2), တင်းနေအောင်ငုံပြီးဆက်တိုက်စုပ်ဆွဲလိုက်ပါတယ် (2), နာနာလေးစုပ်ပေး (2), အရမ်းကောင်း (2), နာနာ (2), လေးစုပ် (2), မနေတတ်တော့ဘူး (2), ဂွင်းတိုက်ပေးလိုက်တယ် (2), သီရိရေ (2), စုပ်စုပ် (2), အားရပါးရ (2), စုပ်ပစ်လိုက်စမ်းပါ (2), လိုးတော့မယ် (2), ဖင်ကုန်းပေး (2), ငါမတ်တပ်လိုးမယ် (2), ပါးစပ်ထဲဆွဲထုတ်ဆွဲသွင်း (2), မတ်တပ်ရပ်ပေးတော့ (2), လိုက်တဲ့ (2), ပြန်မလာခင် (2), တစ်ညလုံးတောင် (2), လိုး (2), ချင်တာပေါ့ဟာ (2), အံမယ် (2), ဘာဖြစ်လို့မခံနိုင်ရမှာလဲ (2), လူကြီးတွေ (2), အိမ် (2), အ၀ခံမှာပေါ့ (2), သမီးရဲ့အရှေ့မှာ (2), ငါ့လီးက (2), လရည်ထွက်ပြီးခါစ (2), ဆိုတော့ (2), ပျော့နေတုန်း (2), သီရိရဲ့ (2), မှုတ်ပေးလေ (2), ပြန်တောင်လာအောင် (2), ထိုင်နေတဲ့ (2), ကုန်းပေး (2), ဆောက်စိ (2), ဆောက်ဖုတ်ထဲမှာ (2), တက်လိုးချင်လာတယ် (2), လိုးနေ (2), ဆောင့်နေတော့တာပဲ (2), သူကလိုးလို့ (2), ကောင်းကောင်းနဲ့ (2), လိုးနေပေမယ့် (2), ခံနေရတာ (2), အားမရတော့ပဲကိုယ်တိုင် (2), နင်ပက်လက်လှန်အိပ် (2), ရပါတယ် (2), အပေါ်က (2), တက်ဆောင့်မယ် (2), ပက်လက်လှန်ပေးထားတဲ့ (2), သူ့ရဲ့ (2), လီးကြီးကိုသမီးရဲ့ (2), ဆောက်ပတ်အ၀နဲ့ (2), တေ့လိုက်ပြီး (2), ထိုင်ချလိုက်တော့သမီးရဲ့ (2), မရပ်မနားကို (2), ကောင်းနေပုံ (2), ပြူးပြူးလေး (2), လိုက်တာ (2), အမှုတ်ခံထားရလို့ (2), သွားရည်တွေစိုနေတဲ့ (2), ပွတ်ပြီး (2), သမီးရဲ့ဆောက်ပတ်ထဲဖိသွင်းလိုက်ပြီး (2), ဆောင့်တော့ (2), သမီးကော့ကော့တက်သွားပါတယ် (2), ကောင်း (2), ဒီပုံစံက (2), အတော်ကို (2), အလိုးခံနေတဲ့ (2), သူလိုးလို့ (2), ခါးကို (2), အသားကုန်ကော့ပြီး (2), နောက်ပစ် (2), ပေးထားတော့ (2), သူလိုးရ (2), ဆောင့်ရတာ (2), ပွတ်ပေးလိုက်တော့ (2), အာသာပြေတာပေါ့ (2), နေပါတော့တယ် (2), သိလျက်နှင့် (2), ပြောရတာပေါ့ (2), အိမ်မှာလည်းဘယ်သူမှမရှိဘူးမဟုတ်လား (2), အိမ်ထဲမှာဘယ်လို (2), အခြေအနေကို (2), ကြုံရ (2), မည်ကို (2), သူ့ကိုခေါင်းညိတ်ပြလိုက်တယ် (2), ဆေးဆေး (2), အိမ်ထဲရောက်တော့ကုလားထိုင်ပေါ်မှာ (2), စကားထိုင် (2), ပြောနေကြရင်း (2), သူ့ရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ (2), နှုတ် (2), ခမ်းတွေကို (2), စုပ်ပြီး (2), စကား (2), အေးအေး (2), သူ့လျှာကို (2), အစည်း (2), တြတာပေါ့ (2), အိမ်ပြန်ရောက်တော့ကျူရှင်မရှိ (2), တာကိုမသိတဲ့ (2), အိမ်ရှေ့မှာ (2), ရောက်နေတယ် (2), ဟယ် (2), ရာဇာပါလား (2), အဝေးရှိလို့ (2), အတော်ပဲဟာ (2), တို့ဝိုင်းကို (2), မသင်နိုင်ဘူးတဲ့ (2), ကျန်တဲ့ (2), သူတွေရော (2), ပြန်သွား (2), ပြီလား (2), အေးပေါ့ (2), နမ်းပါ (2), သမီးပါးစပ်ထဲကို (2), ကျူရှင်မရှိတာနဲ့ (2), ထိုးထည့်ဖူးတာပဲ (2), နှစ်ယောက်စလုံး (2), ၁၀နှစ် (2), အရွယ် (2), လောက်ပေါ့ (2), ကစားကြရင်းရာဇာက (2), လေးနဲ့ (2), ဘယ် (2), မှတ်မိတာပေါ့ (2), မမှတ်မိပဲနေမှာလဲ (2), အခုအဲဒီလိုလုပ်ကြရ (2), အောင်ဟယ် (2), သမီးသူ့ကို (2), ဘာမှ (2), ပြန်မပြောဘဲ (2), ရီနေလိုက်ပါတယ် (2), အဲ့ဒီတုန်းက (2), မှတ်မိသေးလား (2), သွင်းပြီးတော့လဲ (2), သူ့နှုတ်ခမ်း (2), ကလိနေတယ်လေ (2), သူ့ကို (2), ငေးကြည့်နေရာက (2), သမီးလက်တစ်ဖက်နဲ့ (2), သူ့လည်ပင်းကို (2), သိုင်းဖက်လိုက်ပြီး (2), သမီးရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ (2), တွေကို (2), ကစားကြတာ (2), ပြန်နမ်း (2), လေးကို (2), အဲဒီအချိန်မှာ (2), ဟဲ့ (2), ငယ်ငယ်တုန်းက (2), လင်မယားလုပ် (2), တိုင်း (2), ပျော်ရွှင်စွာပဲအိမ်ပြန်သွား (2), သူငယ်ချင်းတွေလဲ (2), ထပ်နမ်းနေရင်းနေနဲ့ (2), တန်းတက် (2), posted (2), သမီးနာမည်က (2), အသက်က (2), နှစ် (2), နေတယ်လေ (2), ၁၄နှစ်သမီးပေမယ့် (2), လျှော့မတွက်နဲ့နော် (2), ရည်းစား (2), ယောက်တောင်ထားဖူးတယ် (2), နောက်ဆုံးရည်းစားက (2), ငယ်သူငယ်ချင်းတွေလေ (2), သူ့နာမည်က (2), unknown (2), သူ့အဖေ (2), load (2), theme (2), subscribe (2), comments (2), atom (2), home (2), older (2), newer (2), more (2), add (2), replies (2), delete (2), မိုက် (2), february (2), 2015 (2), ရာဇာတဲ့ (2), ရာထူးတက်ပြီး (2), လာပြောတယ် (2), သင်္ချာကျူရှင်ကို (2), သူ့အမျိုး (2), တစ်ဦးရဲ့ (2), နာရေးရှိလို့ (2), သွားတော့ (2), မနက်ပိုင်း (2), ကျောင်းမတက်နိုင်ဘူး (2), သမီးတို့က (2), အတန်းပိုင်ဆရာမဆီမှာယူတယ် (2), ကျူရှင်ယူကြတယ် (2), ကျောင်း (2), မတက်နိုင်တဲ့နေ့ကကျောင်းဆင်း (2), ခါနီးရောက်တော့ (2), အစည်းအဝေးရှိလို့ (2), သမီးတို့ဝိုင်းကို (2), မသင်နိုင် (2), ဘူးလို့ (2), တစ်နေ့ (2), ၀ိုင်း (2), နယ်ပြောင်းသွားလို့ (2), ငြိသွားတာ (2), ကွဲသွားကြတာ (2), အခု (2), သူတို့ (2), မိသားစုက (2), သမီးတို့လမ်းထဲ (2), ပြန်ပြောင်းလာကြပြီး (2), သူနဲ့သမီး (2), တန်း (2), သမီးအိမ်မှာ (2), တက်တော့လည်းတစ်တန်းထဲ (2), ကျှူရှင်တွေလည်း (2), အတူအတူပဲ (2), တစ်ခြား (2), သူငယ်ချင်း (2), ယောက်နဲ့အတူ (2), သမီးကို (2), သေးသေး (2), လူ့လက် (2), ပါးပေါ် (2), ထွက်လာတော့တာပဲ (2), ကောင်းမှကောင်း (2), ရှူး (2), သူ့လရည်တွေက (2), များလည်းများတော့ (2), ကိုပါ (2), အားခနဲအသံထွက်လာပြီး (2), စီးကျလာတယ် (2), သမီးပါးစပ်ထဲဝင်လာတဲ့ (2), မြိုချပြီး (2), လီးမှာပေနေတဲ့လရည်တွေကိုပါ (2), လျှာနဲ့ (2), အသား (2), ကုန် (2), လရည်တွေလည်း (2), ရာဇာဆီက (2), ခုတင်စောင်းမှာ (2), နည်းတစ်မျိုးပြောင်းပြီးမှုတ်ပေးလိုက်တယ် (2), လုပ်ပေးနေရာက (2), ကြည့်ဖူးတဲ့ (2), သြကားတွေထဲကလို (2), ဒစ်ကိုလျှာနဲ့ (2), အသားကုန် (2), လျှက်လိုက်တော့ (2), ထွန့်ထွန့်လူးသွားတာပေါ့ (2), ဒစ် (2), လုပ်ပေးလိုက်တော့ (2), တစ်ဖက်ကို (2), ပါးစပ်နဲ့ငုံ (2), နှုတ်ခမ်းနဲ့ဖိပြီး (2), အခါ (2), လောက် (2), ဆွဲထုတ်ဆွဲသွင်း (2), လျှက်ပေးလိုက်တယ် (2), ပက်လက်လှန် (2), ပါးစပ်ထဲ (2), ဘယ်လိုမှစိတ်ထိန်းလို့ (2), အားဇိမ်ပဲကွယ် (2), လက်နဲ့ (2), လိုးတာတောင် (2), ဒါလောက် (2), ကောင်းနေ (2), ရလားဟယ် (2), ရာဇာရေ (2), မရတော့ဘူး (2), ကော့ပျံသွားတော့တာပဲ (2), လိုးကြရအောင် (2), နင့်လီးနဲ့လိုးတော့ (2), ဆိုတော့မှ (2), ရာဇာကမတ်တပ်ရပ်ပြီး (2), အရည်တွေ (2), ပေပွနေတဲ့ (2), ဆောက်စိပြူးပြူး (2), အို (2), လုပ်နေတော့ (2), ကားပေးထားတဲ့ (2), အပေါက်ကို (2), ခြေထောက် (2), နှစ်ဖက်ကြားမှာ (2), ဒူးထောက်ပြီး (2), ဆောက် (2), ပတ်ကို (2), လီးနဲ့ (2), မလိုးသေးပဲဆောက်ဖုတ် (2), လက်ခလယ်နဲ့ (2), သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက် (2), ထိုးမွှေလိုက်တော့ (2), သမီးဆောက်ဖုတ်ထဲမှာ (2), တင်းခနဲဖြစ်သွားတယ် (2), သူကလက်ခလယ်နဲ့ (2), ဖောင်းမို့နေတဲ့ (2), ဆောက်ပတ်လေးကို (2), ခပ်ကြမ်းကြမ်းပဲ (2), အသွင်းအထုတ် (2), တစ်ခုလုံးကို (2), အူး (2), ပြီးခဲ့တဲ့ (2), လီးပေါ်မှာ (2), တင်ပေးထားလိုက်တော့ (2), ဆုပ်ကိုင် (2), ပွတ်သတ် (2), လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ် (2), သူ့လီးက (2), နှစ်လောက်က (2), ဆွဲယူပြီး (2), ထိုးထည့်ခဲ့တုန်းကလို (2), သေးသေးလေး (2), မဟုတ်တော့ဘူး (2), ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ (2), လက်ထဲမှာ (2), တပြည့်ကြီး (2), ဖြစ်နေတယ် (2), သူရဲ့ (2), လက်တစ်ဖက်ကို (2), ဆုပ်ချေပေးနေရင်း (2), သမီးကလည်း (2), အကျီရဲ့အောက်ထဲလျှိုသွင်းပြီး (2), သမီးရဲ့ (2), နို့လေးတွေကို (2), လက်နဲ့ (2), အသာအယာဖွဖွလေး (2), ဆုပ်ကိုင်ပြီး (2), ပွတ်ချေပေးနေတယ် (2), ဘော်လီ (2), လှန်မလိုက်ပြီး (2), ချွတ်ထားတော့ (2), သူလွတ်လွတ် (2), လပ်လပ် (2), ကိုင်လို့ရနေတာပေါ့ (2), နို့တွေကို (2), ကိုင်နေရင်းနဲ့ (2), ပုဆိုးကို (2), သမီးနို့အုံလေးကို (2), နေလိုက်ပါတယ် (2), နို့သီးခေါင်းလေးကိုပါ (2), နှုတ်ခမ်းပေါ် (2), ချွတ်ပါတော့တယ် (2), သူ့အ၀တ်တွေကိုပါချွတ်ပြီးသမီးကို (2), ခုတင်ပေါ် (2), အသာတွန်း (2), လှဲ (2), ပြီးတော့မှသူက (2), သူ့ရဲ့လီးကြီးကို (2), တင်ပေးပြီး (2), ရောက်တော့ (2), လက်ညိုး (2), စုပ်ချင်နေတာမို့ (2), အရင်းကကိုင်ပြီး (2), သူ့ဒစ်ကိုပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်ပြီး (2), ငုံထား (2), ရင်း (2), အထုတ် (2), ရဲ့စကတ်ကို (2), လီးစုပ်ပေးနော် (2), အိပ်ခန်းထဲ (2), ပွတ်ပေးနေတယ် (2), အိပ်ခန်းထဲခေါ်သွားပါတယ် (2), လက်မတွေနဲ့ (2), ပွတ်ချေပေးနေရာက (2), တစ်ဆင့်တက် (2), စကတ်လေးကိုလှန်ပြီး (2), သမီးရဲ့ဆောက်ပတ်လေးကို (2), သူ့လက်နဲ့ (2), ပြီး (2), အိမ်ရှေ့ခန်းကြီးမှာ (2), ဒါဆိုရင် (2), နင့်အိပ်ခန်းထဲသွားကြမယ်လေ (2), နော် (2), မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပါတယ် (2), သမီးကိုပါ (2), မလုပ်ပါနဲ့ဟယ် (2), ဆွဲထူပွေ့ချီပြီး (2), ဇရက်ဂျိုးထင်, ပထမဆုံးအချစ်ကိုစားသုံးခြင်း, ချောသူရယ်, နေလိုနတ်ကယ်, မင်းအတွက်သာ, ကွိုင်, ငှက်မသိလို့, ကာမအရသာ, သို့, archive, လှိုင်, blog, မဟုတ်ဘူး, images, pinterest, facebook, twitter, blogthis, email, this, ဖြေကြည့်ပါ, ပဟေဠိနန်းတော်တော့, ဟတ်ဟတ်, အာသာလေးတော့ပြေတာပေါ့, ဟီးဟီး, ကျွန်တော်နှင့်မမများ, inc, သူငယ်ချင်းကောင်း, ကျွန်တော်နဲ့, molotovcoketail, blogger, powered, followers, view, complete, profile, about, မာရ်နတ်, မယာပါသမီး, မချော, မမသွယ်, ယောက်, ဇော်ရဲ, သရဲကုန်းမှာအစွဲကြုံးမယ်, မောင်ဇော်ချစ်သောဆရာမ, ကောင်မလေး, အချစ်သူနာပြု, အိမ်တွင်းဇတ်လမ်း, သန္တာလင်း, ခေါ်, အပျိုစင်ရဲ့ပေးဆပ်ခြင်း, ဒေါက်တာမမ, awesome,
အာသာဖြေတော့ အာသာပြေတာပေါ့ ငယ်ငယ်ကဇတ်လမ်း thinzar achitywar အာသာဖြေတော့ အာသာပြေတာပေါ့ ဖြေကြည့်ပါ ပဟေဠိနန်းတော်တော့ မဟုတ်ဘူး ဟတ်ဟတ် အာသာလေးတော့ပြေတာပေါ့ ဟီးဟီး tuesday september 14 2010 ငယ်ငယ်ကဇတ်လမ်း thinzar achitywar သမီးနာမည်က သီရိ အသက်က ၁၄ နှစ် ၉ တန်းတက် နေတယ်လေ ၁၄နှစ်သမီးပေမယ့် လျှော့မတွက်နဲ့နော် ရည်းစား ၃ ယောက်တောင်ထားဖူးတယ် သမီးရဲ့ နောက်ဆုံးရည်းစားက ငယ်သူငယ်ချင်းတွေလေ သူ့နာမည်က ရာဇာတဲ့ သူ့အဖေ ရာထူးတက်ပြီး နယ်ပြောင်းသွားလို့ ကွဲသွားကြတာ အခု သူတို့ မိသားစုက သမီးတို့လမ်းထဲ ပြန်ပြောင်းလာကြပြီး သူနဲ့သမီး ငြိသွားတာ ၉ တန်း တက်တော့လည်းတစ်တန်းထဲ ကျှူရှင်တွေလည်း အတူအတူပဲ တစ်ခြား သူငယ်ချင်း ၄ ယောက်နဲ့အတူ သမီးအိမ်မှာ ၀ိုင်း ကျူရှင်ယူကြတယ် တစ်နေ့ သူက သူ့အမျိုး တစ်ဦးရဲ့ နာရေးရှိလို့ သွားတော့ မနက်ပိုင်း ကျောင်းမတက်နိုင်ဘူး သမီးတို့က သင်္ချာကျူရှင်ကို အတန်းပိုင်ဆရာမဆီမှာယူတယ် ရာဇာ ကျောင်း မတက်နိုင်တဲ့နေ့ကကျောင်းဆင်း ခါနီးရောက်တော့ ဆရာမက ဒီနေ့ညနေ အစည်းအဝေးရှိလို့ သမီးတို့ဝိုင်းကို မသင်နိုင် ဘူးလို့ လာပြောတယ် သူငယ်ချင်းတွေလဲ ကျူရှင်မရှိတာနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာပဲအိမ်ပြန်သွား တြတာပေါ့ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ကျူရှင်မရှိ တာကိုမသိတဲ့ ရာဇာက အိမ်ရှေ့မှာ ရောက်နေတယ် ဟယ် ရာဇာပါလား ဆရာမက ဒီနေ့ညနေ အစည်း အဝေးရှိလို့ တို့ဝိုင်းကို မသင်နိုင်ဘူးတဲ့ ကျန်တဲ့ သူတွေရော ပြန်သွား ပြီလား အေးပေါ့ အတော်ပဲဟာ နင်နဲ့ငါ အေးအေး ဆေးဆေး စကား ပြောရတာပေါ့ အိမ်မှာလည်းဘယ်သူမှမရှိဘူးမဟုတ်လား အင်း သမီးက အိမ်ထဲမှာဘယ်လို အခြေအနေကို ကြုံရ မည်ကို သိလျက်နှင့် သူ့ကိုခေါင်းညိတ်ပြလိုက်တယ် အိမ်ထဲရောက်တော့ကုလားထိုင်ပေါ်မှာ စကားထိုင် ပြောနေကြရင်း သူက သူ့ရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ သမီးရဲ့ နှုတ် ခမ်းတွေကို စုပ်ပြီး နမ်းပါ တယ် သူ့လျှာကို သမီးပါးစပ်ထဲကို သွင်းပြီးတော့လဲ ကလိနေတယ်လေ သမီးလည်း သူ့ကို ငေးကြည့်နေရာက သမီးလက်တစ်ဖက်နဲ့ သူ့လည်ပင်းကို သိုင်းဖက်လိုက်ပြီး သမီးရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ သူ့နှုတ်ခမ်း တွေကို ပြန်နမ်း နေပါတော့တယ် အဲဒီအချိန်မှာ သူက ဟဲ့ ငါတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက နင်နဲ့ငါ လင်မယားလုပ် တိုင်း ကစားကြတာ မှတ်မိသေးလား ဟင်း ဟင်း မှတ်မိတာပေါ့ အဲ့ဒီတုန်းက နှစ်ယောက်စလုံး ၁၀နှစ် အရွယ် လောက်ပေါ့ ကစားကြရင်းရာဇာက သူ့လီး သေးသေး လေးနဲ့ သမီးရဲ့ ဆောက်ဖုတ်ထဲကို ထိုးထည့်ဖူးတာပဲ ဘယ် မမှတ်မိပဲနေမှာလဲ ငါတို့ အခုအဲဒီလိုလုပ်ကြရ အောင်ဟယ် သမီးသူ့ကို ဘာမှ ပြန်မပြောဘဲ ရီနေလိုက်ပါတယ် သူက သမီးကို ထပ်နမ်းနေရင်းနေနဲ့ လူ့လက် တစ်ဖက်ကို သမီးရဲ့ အကျီရဲ့အောက်ထဲလျှိုသွင်းပြီး သမီးရဲ့ နို့လေးတွေကို လက်နဲ့ အသာအယာဖွဖွလေး ဆုပ်ကိုင်ပြီး ပွတ်ချေပေးနေတယ် သမီးကလည်း ဘော်လီ ချွတ်ထားတော့ သူလွတ်လွတ် လပ်လပ် ကိုင်လို့ရနေတာပေါ့ သူက နို့တွေကို ကိုင်နေရင်းနဲ့ ပုဆိုးကို လှန်မလိုက်ပြီး သမီးရဲ့ လက်တစ်ဖက်ကို ဆွဲယူပြီး တောင်မတ်နေတဲ့ သူရဲ့ လီးပေါ်မှာ တင်ပေးထားလိုက်တော့ သမီးလည်း သူ့လီးကို ဆုပ်ကိုင် ပွတ်သတ် နေလိုက်ပါတယ် သူ့လီးက ပြီးခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက်က သမီးရဲ့ ဆောက်ဖုတ်ထဲကို ထိုးထည့်ခဲ့တုန်းကလို သေးသေးလေး မဟုတ်တော့ဘူး ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ သမီး လက်ထဲမှာ တပြည့်ကြီး ဖြစ်နေတယ် သူက သမီးနို့အုံလေးကို ဆုပ်ချေပေးနေရင်း နို့သီးခေါင်းလေးကိုပါ သူ့ လက်ညိုး လက်မတွေနဲ့ ပွတ်ချေပေးနေရာက တစ်ဆင့်တက် ပြီး သမီးရဲ့ စကတ်လေးကိုလှန်ပြီး သမီးရဲ့ဆောက်ပတ်လေးကို သူ့လက်နဲ့ ပွတ်ပေးနေတယ် ရာဇာရယ် အိမ်ရှေ့ခန်းကြီးမှာ မလုပ်ပါနဲ့ဟယ် ဒါဆိုရင် နင့်အိပ်ခန်းထဲသွားကြမယ်လေ နော် ဆိုပြီး မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပါတယ် ပြီးတော့ သမီးကိုပါ ဆွဲထူပွေ့ချီပြီး အိပ်ခန်းထဲခေါ်သွားပါတယ် အိပ်ခန်းထဲ ရောက်တော့ သမီး ရဲ့စကတ်ကို ချွတ်ပါတော့တယ် ပြီးတော့ သူ့အ၀တ်တွေကိုပါချွတ်ပြီးသမီးကို ခုတင်ပေါ် အသာတွန်း လှဲ လိုက်တယ် ပြီးတော့မှသူက သူ့ရဲ့လီးကြီးကို သမီးရဲ့ နှုတ်ခမ်းပေါ် တင်ပေးပြီး လီးစုပ်ပေးနော် သီရိ သမီးလည်း သူ့လီးကြီးကို စုပ်ချင်နေတာမို့ သူ့လီးကြီးကို အရင်းကကိုင်ပြီး သူ့ဒစ်ကိုပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်ပြီး ငုံထား ရင်း အသွင်း အထုတ် လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ် အား အူး ကောင်းလိုက်တာ သီရိရယ် ကျွတ် ကျွတ် ပါးစပ်ထဲ အသွင်းအထုတ် လုပ်ပေးနေရာက ကြည့်ဖူးတဲ့ သြကားတွေထဲကလို ဒစ်ကိုလျှာနဲ့ အသားကုန် လျှက်လိုက်တော့ ရာဇာ ထွန့်ထွန့်လူးသွားတာပေါ့ ခဏနေ တော့ နည်းတစ်မျိုးပြောင်းပြီးမှုတ်ပေးလိုက်တယ် သူ့ ဒစ် တစ်ခုလုံးကို ပါးစပ်နဲ့ငုံ နှုတ်ခမ်းနဲ့ဖိပြီး အခါ ၂၀ လောက် ဆက်တိုက် ဆွဲထုတ်ဆွဲသွင်း လုပ်ပေးလိုက်တော့ ရာဇာဆီက အားခနဲအသံထွက်လာပြီး လရည်တွေလည်း ထွက်လာတော့တာပဲ အား ကောင်းမှကောင်း ပဲ ကျွတ် ကျွတ် အား အား ရှူး သူ့လရည်တွေက များလည်းများတော့ သမီး ပါးပေါ် ကိုပါ စီးကျလာတယ် သမီးပါးစပ်ထဲဝင်လာတဲ့ လရည်တွေ ကို မြိုချပြီး လီးမှာပေနေတဲ့လရည်တွေကိုပါ လျှာနဲ့ အသား ကုန် လျှက်ပေးလိုက်တယ် ခုတင်စောင်းမှာ ပက်လက်လှန် ကားပေးထားတဲ့ သမီးရဲ့ ခြေထောက် နှစ်ဖက်ကြားမှာ ဒူးထောက်ပြီး ဆောက် ပတ်ကို လီးနဲ့ မလိုးသေးပဲဆောက်ဖုတ် အပေါက်ကို လက်ခလယ်နဲ့ ထိုးမွှေလိုက်တော့ သမီးဆောက်ဖုတ်ထဲမှာ တင်းခနဲဖြစ်သွားတယ် သူကလက်ခလယ်နဲ့ ဖောင်းမို့နေတဲ့ ဆောက်ပတ်လေးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းပဲ သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက် လုပ်နေတော့ သမီး ကော့ပျံသွားတော့တာပဲ အို ရာဇာရယ် အားဇိမ်ပဲကွယ် ပတ် ပတ် ပတ် ပတ် အိုး ကောင်းလိုက်တာ အား ကျွတ် ကျွတ် အင်း အား လက်နဲ့ လိုးတာတောင် ဒါလောက် ကောင်းနေ ရလားဟယ် ရာဇာရေ ဘယ်လိုမှစိတ်ထိန်းလို့ မရတော့ဘူး အား အား တော်ပြီဟယ် လိုးကြရအောင် နင့်လီးနဲ့လိုးတော့ ဆိုတော့မှ ရာဇာကမတ်တပ်ရပ်ပြီး အရည်တွေ ပေပွနေတဲ့ ဆောက်ခေါင်းအ၀က ဆောက်စိပြူးပြူး လေးကို သူ့ဒစ်ဖျားနဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ပွတ်ပေးလိုက်တော့ သမီးကော့ကော့ တက်လာပါတယ် ဘယ်လို လုပ်နေတာလဲဟယ် အရမ်းယားနေပြီ လိုးမှာဖြင့်လည်း လိုးပေးပါတော့ ဟင်း ဟင်း သူကသမီးကို ခုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်အိပ်ခိုင်းပြီး သမီးရဲ့ ဒူးနှစ်ဖက်ကို လှန်တွန်းလိုက်ပြီး တောင်မတ်နေတဲ့ သူ့ လီးကြီးကို သမီးရဲ့ ဆောက်ပတ်ထဲ ဖိသွင်းလိုက်ပါတော့တယ် ပတ် ဘွတ် အိုး လီးကြီးက တစ်ဝက်လောက်အထိ ၀င်သွားပုံရပါ တယ် သမီးဆောက်ပတ်ထဲမှာတင်းခနဲဖြစ်သွားတယ် သူက အသာလေး ညှောင့်ပေးနေတယ် သမီးလည်း သူ လိုးလို့ ကောင်းအောင် သမီးဆောက်ဖုတ်ကို ပြဲသထက်ပြဲလာအောင်ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဖြဲကားပေးထားတာပေါ့ အား ကျွတ် ကျွတ် အင်း အင်း ပတ် ပတ် ဘွတ် ပတ် အား ကျွတ် ကျွတ် အင်း သူ့လီးကို အသာလေးသွင်းလိုက် ထုတ်လိုက် လုပ်နေ ရာကနေ အားပါးတရ ကုန်းပြီးဆောင့်တော့တာပဲ သူက စိတ် လိုက်မာန်ပါနှင့် အားပါးတရဆောင့်ထိုးလိုက်တော့ သူ့လီး ကြီးက သမီးရဲ့ ဆောက်ခေါင်းအဆုံးအထိ ၀င်သွားတော့တာပေါ့ အား ကျွတ် ကျွတ် အမလေး အင်း အား ကျွတ် ကျွတ် အင်း အမလေး ရာဇာရယ် သမီးလည်း အောက်ကနေပြီး ဖင်ကို ကော့ကော့ပြီး ပြန်လိုးပေးနေတာပေါ့ ပတ် ဘွတ် ပတ် ဘွတ် အား အင့် အင့် ပတ် ဘွတ် ပတ် ဘွတ် အား အီ ဟင်း ဟင်း ကောင်းလိုက်တာ အရမ်းထိတာပဲဟယ် ဆောင့် ဆောင့် နာနာဆောင့် နင့်လီးကြီးက အောက်ကို စိုက်စိုက် ၀င်သွားတာ သိပ်အရသာရှိတာပဲ ဟင်း နင် အောက်ကနေပြီးဖင်ကို ကော့ကော့ပြီး ပြန်လိုး ပေးနေတာလည်း အရမ်းမိုက်တာပဲ ငါ့လီးတစ်ချောင်းလုံးမှာ ကျင်ကနဲ ကျင်ကနဲ ဖြစ်သွားပြီးရင်ထဲ မှာပါအေးပြီး တုန်တုန် ယင်ယင် ဖြစ်လာတယ် ဟ ကဲ ဒါဆိုလဲ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး လိုးပေးပါဦးဟယ် သူလဲ ဆောင့်ဆောင့်ပြီး လိုးနေတော့ ကိုယ်လုံးချင်း ရိုက်မိသံတွေ တဖပ်ဖပ်နဲ့ ထွက်လာတယ် ဖပ်ဖပ် ဖပ်ဖပ် ဖပ်ဖပ် အား ကျွတ် ကျွတ် အင်း အမလေး ရာဇာရယ် ပတ် ဘွတ် အား အင့် အင့် ပတ် ဘွတ် ပတ် ဘွတ် အား အရမ်းကောင်းတာပဲ အား ကျွတ် ကျွတ် အင်း ပတ် ဘွတ် အင့် အင့် အား ဆောက်ဖုတ်ကို ကျိန်းနေတာပဲ သူက စိတ်လိုက်မာန်ပါနှင့် အားပါးတရ ဆောင့်နေ တော့သမီးမှာ လူးလွန့် နေရတယ် သမီးက ဖင်ကို ကော့ကော့ ပေးရင်း ဆောက်ဖုတ် နှုတ်ခမ်း သားနှစ်ခုနဲ့ သူ့လီးကိုညှပ်ပြီး ဆွဲပေးထားလိုက်တော့ သူ အတော် ဇိမ်တွေ့သွားပြီး အပေါ်ကနေ တရှူးရှူး တရှဲရှဲ နှင့် နင်းကန်ဆောင့်နေရင်း သူလီးထဲက လရည်တွေ သမီး ဆောက်ဖုတ်ထဲကို ပန်းထွက် လာတော့တာပေါ့ သူက သူ့လီးကြီးနဲ့ကော့ကော့ပြီး ဆောင့်နေရင်း လက်ကျန် လရည်တွေကို ပန်းထုတ်ပေးနေ ပါတယ် သမီးဆောက်ဖုတ် ထဲမှာလည်း ပူခနဲပဲ ကောင်းလိုက်တာဟယ် ဘယ်လို ပြောရမှန်း တောင်မသိတော့ပါဘူး ဟင်း ငါလည်း နင့်ကိုလိုးရတာ အရမ်းကောင်းတာပဲ သိလား သူက ပြောရင်းနဲ့ သမီးဘေးမှာ ၀င်လှဲလိုက်ပါတယ် နင့် လီးကြီးကလည်းငါ့ဆောက်ဖုတ်ထဲမှာ ပြည့်ကျပ် နေပြီး အရမ်းကို ခံလို့ကောင်းတာပဲ ၅ မိနစ်လောက်နားပြီးတာနဲ့ သမီးက လှဲနေ ရာက ထထိုင်လိုက်ပြီး နင်ငါ့ကို ထပ်လိုးပေးဦးဟယ် နင့်လီးကြီးနဲ့ ငါထပ်အလိုးခံချင်သေးတယ်ဟာ တစ်ခါနဲ့ မ၀သေးဘူးဟ ငါက နင်ခံနိုင်မယ်ဆိုရင် တစ်ညလုံးတောင် လိုး ချင်တာပေါ့ဟာ အံမယ် ဘာဖြစ်လို့မခံနိုင်ရမှာလဲ လူကြီးတွေ အိမ် ပြန်မလာခင် အ၀ခံမှာပေါ့ ငါ့လီးက လရည်ထွက်ပြီးခါစ ဆိုတော့ ပျော့နေတုန်း သီရိရဲ့ နင် မှုတ်ပေးလေ ပြန်တောင်လာအောင် ဆိုပြီး ထိုင်နေတဲ့ သမီးရဲ့အရှေ့မှာ မတ်တပ်ရပ်ပေးတော့ သမီးလည်း သူ့လီးကိုငုံပြီး ဂွင်းတိုက်ပေးလိုက်တယ် ခဏနေ တော့ သူ့လီးကြီးကို ပါးစပ်ထဲဆွဲထုတ်ဆွဲသွင်း လုပ်ပေးနေရာ က ဒစ်ကို တင်းနေအောင်ငုံပြီးဆက်တိုက်စုပ်ဆွဲလိုက်ပါတယ် အိုး ကောင်းလိုက်တာ အား ကျွတ် ကျွတ် အင်း အား သီရိ နာနာလေးစုပ်ပေး အား အရမ်းကောင်း တယ် စုပ် စုပ် နာနာ လေးစုပ် အား အား ဟင်းဟင်း အား ကောင်းလိုက်တာ အား ကျွတ် ကျွတ်အင်း ပတ် ပတ် ပတ် ပတ် အား မနေတတ်တော့ဘူး အား အား အား ဟင်းဟင်း အား သီရိရေ စုပ်စုပ် အားရပါးရ စုပ်ပစ်လိုက်စမ်းပါ အင်း ပတ် ပတ် ပတ် ပတ် ပတ် ပတ် ပတ် ပတ် ပတ် ပတ် ပတ် ပတ် တော်ပြီဟယ် လိုးတော့မယ် ဖင်ကုန်းပေး ငါမတ်တပ်လိုးမယ် ရာဇာက ခုတင်ပေါ်မှာ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ကုန်းပေး လိုက်တဲ့ သမီးရဲ့ ဆောက်ခေါင်းအ၀က ဆောက်စိ ပြူးပြူးလေး ကို အမှုတ်ခံထားရလို့ သွားရည်တွေစိုနေတဲ့ သူ့ဒစ်ဖျားနဲ့ ပွတ်ပြီး သမီးရဲ့ဆောက်ပတ်ထဲဖိသွင်းလိုက်ပြီး ဆက်တိုက် ဆောင့်တော့ သမီးကော့ကော့တက်သွားပါတယ် ပတ် ဘွတ် အိုး ပတ် ဘွတ် ပတ် ဘွတ် အား အင့် အင့် ပတ် ဘွတ် ပတ် ဘွတ် အား အီး ဟင်း ဟင်း ကောင်း လိုက်တာ ဒီပုံစံက အရမ်းထိတာပဲဟယ် အား ကျွတ် ကျွတ် အင်း အား မတ်တပ်ရပ်ပြီး အလိုးခံနေတဲ့ သမီးက သူလိုးလို့ ကောင်းအောင် ခါးကို အသားကုန်ကော့ပြီး ဖင်ကို နောက်ပစ် ပေးထားတော့ သူလိုးရ ဆောင့်ရတာ အတော်ကို ကောင်းနေပုံ ရပါတယ် မရပ်မနားကို လိုးနေ ဆောင့်နေတော့တာပဲ ပတ် ဘွတ် ပတ် ဘွတ် ပတ် ဘွတ် ပတ် ဘွတ် အား ကောင်းလိုက်တာ အား ကျွတ် ကျွတ် အင်း ပတ် ဘွတ် ပတ် ဘွတ် သူကလိုးလို့ ကောင်းကောင်းနဲ့ လိုးနေပေမယ့် သမီး က ခံနေရတာ အားမရတော့ပဲကိုယ်တိုင် တက်လိုးချင်လာတယ် ရာဇာ နင်ပက်လက်လှန်အိပ် ငါ အပေါ်က တက်ဆောင့်မယ် ခုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်လှန်ပေးထားတဲ့ သူ့ရဲ့ တောင်မတ်နေတဲ့ လီးကြီးကိုသမီးရဲ့ ဆောက်ပတ်အ၀နဲ့ တေ့လိုက်ပြီး ထိုင်ချလိုက်တော့သမီးရဲ့ ဆောက်ဖုတ်ထဲမှာ တင်းခနဲ ဖြစ်သွားပြီး သူ့လီးတုတ်တုတ်ကြီးက သမီးရဲ့ဆောက်ဖုတ်ထဲကို တစ်ဆုံး အထိ ၀င်သွားတော့တာပေါ့ ပတ် ဘွတ် အိုး အား သမီးလည်း စိတ်လိုက်မာန်ပါနှင့် အားပါးတရ ဆောင့် ပစ် လိုက်တယ် ဆောင့် တာမှလီးကို ဒစ်ထိပ်ဖျားရောက်တဲ့ အထိ ဆွဲထုတ်လိုက် တစ်ဆုံးအထိ ၀င်အောင် ပြန်ဆောင့်ချ လိုက်နဲ့ အားရပါးရပဲ လိုးနေလိုက်တယ် ရာဇာကလည်း သမီးရဲ့ ဆောင့်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာ အောက်ကကော့ ကော့ ပေးနေတယ် အား ကျွတ် ကျွတ် အင်း အမလေး ရာဇာရယ် ပတ် ဘွတ် အား အင့် အင့် ပတ် ဘွတ် ပတ် ဘွတ် အား အရမ်းကောင်းတာပဲ အား ကျွတ် ကျွတ် အင်း သမီးတို့နှစ်ယောက်ဆောင့်လိုက် ကော့လိုက်နဲ့ စည်းချက်ညီညီ လိုးနေကြရင်းသမီးက သူ့လီးကို အဆုံးထိ ရောက်အောင် ဆွဲမထုတ်တော့ပဲ တစ်ဝက်လောက်အထိပဲ အသွင်း အထုတ်လုပ်ပြီး ခပ်သွက်သွက်လေး ဆောင့်ပေးနေလိုက်တယ် ပတ် ဘွတ် ပတ် ဘွတ် အ အ အ အားသီရိရယ် အင့် အင့် အီး ပတ် ဘွတ် ပတ် ဘွတ် အား အရမ်းကောင်းတာပဲ အား ကျွတ် ကျွတ် အင်း ပတ် ဘွတ် ပတ် ဘွတ် အား သီရိ ငါ ငါမရတော့ဘူး ထွက်တော့မယ် အား အ အား ဆိုတာနဲ့သမီးကဆောင့်ပေးနေတဲ့ အရှိန်ကို မြန်လိုက်ပြီး ၁၀ ချက်လောက် ဆက်တိုက်ဆောင့် လိုက်တော့ အား ထွက်ပြီ ထွက်သွားပြီ ဆိုတဲ့ ရာဇာ့အသံနဲ့အတူ သမီး ဆောက်ခေါင်းထဲ မှာ ပူခနဲဖြစ်သွားတယ် သမီးက လရည်ထွက်ပြီးသား သူ့လီးကြီးကို ဆောက်ဖုတ်ကမချွတ်သေးပဲ အသာလေးအသွင်းအထုတ်လုပ်နေရင်းနဲ့ပဲခဏနေတော့ သူ့လီးကြီးကပျော့ပြီး ကျွတ်ထွက် သွားပါတော့ တယ် ကောင်းလိုက်တာ သီရိရယ် ငါလည်း အရမ်းကောင်းတာပဲ လီးနဲ့အလိုး ခံဖူးတာ ဒါပထမဆုံးပဲ ခါတိုင်းဆိုရင် ဆောက်ဖုတ်ထဲ လက် ထည့်ပြီး ကလိနေရုံနဲ့ ကျေနပ်နေရတာ လက်တွေ့အလိုးခံ ရမှပဲ အရသာခြင်းက တခြားစီပဲဆိုတာ သိရတော့တယ် သမီးတို့ နှစ်ယောက်လုံး ထပ်ပြီး လိုးချင်ကြပေမယ့် မိဘတွေပြန်လာတော့မှာ မို့လို့ခဏနေပြီး လူခြင်းခွဲလိုက် ကြရပါတော့တယ် posted by ချစ်လူမိုက် at340 am email this blogthis share to twitter share to facebook share to pinterest 1 comment unknown february 27 2015 at 8 20 am မိုက် တယ် reply delete replies reply add comment load more newer post older post home subscribe to post comments atom blog archive 2010 20 september 20 ပထမဆုံးအချစ်ကိုစားသုံးခြင်း နေလိုနတ်ကယ် ချောသူရယ် မင်းအတွက်သာ ငှက်မသိလို့ ဇရက်ဂျိုးထင် ကာမအရသာ လှိုင် သို့ ကွိုင် မမ ကျွန်တော်နှင့်မမများ သူငယ်ချင်းကောင်း မမသွယ် ဒေါက်တာမမ သန္တာလင်း ခေါ် အပျိုစင်ရဲ့ပေးဆပ်ခြင်း အိမ်တွင်းဇတ်လမ်း ငယ်ငယ်ကဇတ်လမ်း thinzar achitywar အချစ်သူနာပြု ကောင်မလေး ၁ မောင်ဇော်ချစ်သောဆရာမ သရဲကုန်းမှာအစွဲကြုံးမယ် ကျွန်တော်နဲ့ မချော ၃ ယောက် ဇော်ရဲ မာရ်နတ် မယာပါသမီး about me ချစ်လူမိုက် view my complete profile followers tuesday september 14 2010 ငယ်ငယ်ကဇတ်လမ်း thinzar achitywar သမီးနာမည်က သီရိ အသက်က ၁၄ နှစ် ၉ တန်းတက် နေတယ်လေ ၁၄နှစ်သမီးပေမယ့် လျှော့မတွက်နဲ့နော် ရည်းစား ၃ ယောက်တောင်ထားဖူးတယ် သမီးရဲ့ နောက်ဆုံးရည်းစားက ငယ်သူငယ်ချင်းတွေလေ သူ့နာမည်က ရာဇာတဲ့ သူ့အဖေ ရာထူးတက်ပြီး နယ်ပြောင်းသွားလို့ ကွဲသွားကြတာ အခု သူတို့ မိသားစုက သမီးတို့လမ်းထဲ ပြန်ပြောင်းလာကြပြီး သူနဲ့သမီး ငြိသွားတာ ၉ တန်း တက်တော့လည်းတစ်တန်းထဲ ကျှူရှင်တွေလည်း အတူအတူပဲ တစ်ခြား သူငယ်ချင်း ၄ ယောက်နဲ့အတူ သမီးအိမ်မှာ ၀ိုင်း ကျူရှင်ယူကြတယ် တစ်နေ့ သူက သူ့အမျိုး တစ်ဦးရဲ့ နာရေးရှိလို့ သွားတော့ မနက်ပိုင်း ကျောင်းမတက်နိုင်ဘူး သမီးတို့က သင်္ချာကျူရှင်ကို အတန်းပိုင်ဆရာမဆီမှာယူတယ် ရာဇာ ကျောင်း မတက်နိုင်တဲ့နေ့ကကျောင်းဆင်း ခါနီးရောက်တော့ ဆရာမက ဒီနေ့ညနေ အစည်းအဝေးရှိလို့ သမီးတို့ဝိုင်းကို မသင်နိုင် ဘူးလို့ လာပြောတယ် သူငယ်ချင်းတွေလဲ ကျူရှင်မရှိတာနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာပဲအိမ်ပြန်သွား တြတာပေါ့ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ကျူရှင်မရှိ တာကိုမသိတဲ့ ရာဇာက အိမ်ရှေ့မှာ ရောက်နေတယ် ဟယ် ရာဇာပါလား ဆရာမက ဒီနေ့ညနေ အစည်း အဝေးရှိလို့ တို့ဝိုင်းကို မသင်နိုင်ဘူးတဲ့ ကျန်တဲ့ သူတွေရော ပြန်သွား ပြီလား အေးပေါ့ အတော်ပဲဟာ နင်နဲ့ငါ အေးအေး ဆေးဆေး စကား ပြောရတာပေါ့ အိမ်မှာလည်းဘယ်သူမှမရှိဘူးမဟုတ်လား အင်း သမီးက အိမ်ထဲမှာဘယ်လို အခြေအနေကို ကြုံရ မည်ကို သိလျက်နှင့် သူ့ကိုခေါင်းညိတ်ပြလိုက်တယ် အိမ်ထဲရောက်တော့ကုလားထိုင်ပေါ်မှာ စကားထိုင် ပြောနေကြရင်း သူက သူ့ရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ သမီးရဲ့ နှုတ် ခမ်းတွေကို စုပ်ပြီး နမ်းပါ တယ် သူ့လျှာကို သမီးပါးစပ်ထဲကို သွင်းပြီးတော့လဲ ကလိနေတယ်လေ သမီးလည်း သူ့ကို ငေးကြည့်နေရာက သမီးလက်တစ်ဖက်နဲ့ သူ့လည်ပင်းကို သိုင်းဖက်လိုက်ပြီး သမီးရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ သူ့နှုတ်ခမ်း တွေကို ပြန်နမ်း နေပါတော့တယ် အဲဒီအချိန်မှာ သူက ဟဲ့ ငါတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက နင်နဲ့ငါ လင်မယားလုပ် တိုင်း ကစားကြတာ မှတ်မိသေးလား ဟင်း ဟင်း မှတ်မိတာပေါ့ အဲ့ဒီတုန်းက နှစ်ယောက်စလုံး ၁၀နှစ် အရွယ် လောက်ပေါ့ ကစားကြရင်းရာဇာက သူ့လီး သေးသေး လေးနဲ့ သမီးရဲ့ ဆောက်ဖုတ်ထဲကို ထိုးထည့်ဖူးတာပဲ ဘယ် မမှတ်မိပဲနေမှာလဲ ငါတို့ အခုအဲဒီလိုလုပ်ကြရ အောင်ဟယ် သမီးသူ့ကို ဘာမှ ပြန်မပြောဘဲ ရီနေလိုက်ပါတယ် သူက သမီးကို ထပ်နမ်းနေရင်းနေနဲ့ လူ့လက် တစ်ဖက်ကို သမီးရဲ့ အကျီရဲ့အောက်ထဲလျှိုသွင်းပြီး သမီးရဲ့ နို့လေးတွေကို လက်နဲ့ အသာအယာဖွဖွလေး ဆုပ်ကိုင်ပြီး ပွတ်ချေပေးနေတယ် သမီးကလည်း ဘော်လီ ချွတ်ထားတော့ သူလွတ်လွတ် လပ်လပ် ကိုင်လို့ရနေတာပေါ့ သူက နို့တွေကို ကိုင်နေရင်းနဲ့ ပုဆိုးကို လှန်မလိုက်ပြီး သမီးရဲ့ လက်တစ်ဖက်ကို ဆွဲယူပြီး တောင်မတ်နေတဲ့ သူရဲ့ လီးပေါ်မှာ တင်ပေးထားလိုက်တော့ သမီးလည်း သူ့လီးကို ဆုပ်ကိုင် ပွတ်သတ် နေလိုက်ပါတယ် သူ့လီးက ပြီးခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက်က သမီးရဲ့ ဆောက်ဖုတ်ထဲကို ထိုးထည့်ခဲ့တုန်းကလို သေးသေးလေး မဟုတ်တော့ဘူး ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ သမီး လက်ထဲမှာ တပြည့်ကြီး ဖြစ်နေတယ် သူက သမီးနို့အုံလေးကို ဆုပ်ချေပေးနေရင်း နို့သီးခေါင်းလေးကိုပါ သူ့ လက်ညိုး လက်မတွေနဲ့ ပွတ်ချေပေးနေရာက တစ်ဆင့်တက် ပြီး သမီးရဲ့ စကတ်လေးကိုလှန်ပြီး သမီးရဲ့ဆောက်ပတ်လေးကို သူ့လက်နဲ့ ပွတ်ပေးနေတယ် ရာဇာရယ် အိမ်ရှေ့ခန်းကြီးမှာ မလုပ်ပါနဲ့ဟယ် ဒါဆိုရင် နင့်အိပ်ခန်းထဲသွားကြမယ်လေ နော် ဆိုပြီး မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပါတယ် ပြီးတော့ သမီးကိုပါ ဆွဲထူပွေ့ချီပြီး အိပ်ခန်းထဲခေါ်သွားပါတယ် အိပ်ခန်းထဲ ရောက်တော့ သမီး ရဲ့စကတ်ကို ချွတ်ပါတော့တယ် ပြီးတော့ သူ့အ၀တ်တွေကိုပါချွတ်ပြီးသမီးကို ခုတင်ပေါ် အသာတွန်း လှဲ လိုက်တယ် ပြီးတော့မှသူက သူ့ရဲ့လီးကြီးကို သမီးရဲ့ နှုတ်ခမ်းပေါ် တင်ပေးပြီး လီးစုပ်ပေးနော် သီရိ သမီးလည်း သူ့လီးကြီးကို စုပ်ချင်နေတာမို့ သူ့လီးကြီးကို အရင်းကကိုင်ပြီး သူ့ဒစ်ကိုပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်ပြီး ငုံထား ရင်း အသွင်း အထုတ် လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ် အား အူး ကောင်းလိုက်တာ သီရိရယ် ကျွတ် ကျွတ် ပါးစပ်ထဲ အသွင်းအထုတ် လုပ်ပေးနေရာက ကြည့်ဖူးတဲ့ သြကားတွေထဲကလို ဒစ်ကိုလျှာနဲ့ အသားကုန် လျှက်လိုက်တော့ ရာဇာ ထွန့်ထွန့်လူးသွားတာပေါ့ ခဏနေ တော့ နည်းတစ်မျိုးပြောင်းပြီးမှုတ်ပေးလိုက်တယ် သူ့ ဒစ် တစ်ခုလုံးကို ပါးစပ်နဲ့ငုံ နှုတ်ခမ်းနဲ့ဖိပြီး အခါ ၂၀ လောက် ဆက်တိုက် ဆွဲထုတ်ဆွဲသွင်း လုပ်ပေးလိုက်တော့ ရာဇာဆီက အားခနဲအသံထွက်လာပြီး လရည်တွေလည်း ထွက်လာတော့တာပဲ အား ကောင်းမှကောင်း ပဲ ကျွတ် ကျွတ် အား အား ရှူး သူ့လရည်တွေက များလည်းများတော့ သမီး ပါးပေါ် ကိုပါ စီးကျလာတယ် သမီးပါးစပ်ထဲဝင်လာတဲ့ လရည်တွေ ကို မြိုချပြီး လီးမှာပေနေတဲ့လရည်တွေကိုပါ လျှာနဲ့ အသား ကုန် လျှက်ပေးလိုက်တယ် ခုတင်စောင်းမှာ ပက်လက်လှန် ကားပေးထားတဲ့ သမီးရဲ့ ခြေထောက် နှစ်ဖက်ကြားမှာ ဒူးထောက်ပြီး ဆောက် ပတ်ကို လီးနဲ့ မလိုးသေးပဲဆောက်ဖုတ် အပေါက်ကို လက်ခလယ်နဲ့ ထိုးမွှေလိုက်တော့ သမီးဆောက်ဖုတ်ထဲမှာ တင်းခနဲဖြစ်သွားတယ် သူကလက်ခလယ်နဲ့ ဖောင်းမို့နေတဲ့ ဆောက်ပတ်လေးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းပဲ သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက် လုပ်နေတော့ သမီး ကော့ပျံသွားတော့တာပဲ အို ရာဇာရယ် အားဇိမ်ပဲကွယ် ပတ် ပတ် ပတ် ပတ် အိုး ကောင်းလိုက်တာ အား ကျွတ် ကျွတ် အင်း အား လက်နဲ့ လိုးတာတောင် ဒါလောက် ကောင်းနေ ရလားဟယ် ရာဇာရေ ဘယ်လိုမှစိတ်ထိန်းလို့ မရတော့ဘူး အား အား တော်ပြီဟယ် ...
blogger.com Verify istockphoto.com Verify
Houseoffraiser.com/__med... Verify www.tvdebate.Co.kr Verify cusco-daisuki.fc2.xxx Verify
baichunlink.com Verify my.tokyo-hot.com/product Verify www.artofzoo.com Verify
en.av4.xyz Verify www.ivoox.com/contenido-... Verify wooricasinoo.com/casino/... Verify
www.transtats.bts.gov/Er... Verify www.kynghidongduong.vn Verify ohimesamaclub.com/refswe... Verify
Date Wed, 21 Apr 2021 07:24:47 GMT
Expires Wed, 21 Apr 2021 07:24:47 GMT
Last-Modified Fri, 28 Feb 2020 22:45:30 GMT
ETag W/ 44ea76cfbb5f5b872348fe7ae7583ea988320af75f5621d6f65fd6972b9f3c0f
title="အာသာဖြေတော့ အာသာပြေတာပေါ့: ငယ်ငယ်ကဇတ်လမ်း thinzar (achitywar)"
content="ငယ်ငယ်ကဇတ်လမ်း thinzar (achitywar)" property="og:title"
content="သမီးနာမည်က သီရိ။ အသက်က ၁၄ နှစ်။ ၉ တန်းတက် နေတယ်လေ။ ၁၄နှစ်သမီးပေမယ့် လျှော့မတွက်နဲ့နော်။ ရည်းစား ၃ ယောက်တောင်ထားဖူးတယ်။ သမီးရဲ့ နောက်ဆံ..." property="og:description"
page size 176058
load time (s) 0.527033
speed download 59962